Ibufee ọdịnaya site na iPhone ka Google Nexus 6 were were
Google si ọhụrụ flagship ekwentị - Google Nexus 6 N'ikpeazụ-abịarute. Nke a ibu ekwentị na-onwem na Android 5.0 Lollipop, ma wuru na-3GB Ram maka 32GB na 64 GB ụdị. Ụda oké ma na-achọ okporo mmiri gị ochie iPhone maka Google Nexus 6? Na-agbanwe agbanwe a ekwentị bụ otu ibé achicha. Otú ọ dị, mgbe na-abịa ọdịnaya nyefe, ihe na-aghọ a bit siri ike. Ke ibuotikọ emi, ga-amasị m agwa gị otú ị ga-esi na site na ya na nkọwa.
1. shortcut: Nyefee ọdịnaya site iPhone ka Nexus 6 na 1 Pịa (120 mins, <10 mins)
2. Free Ụzọ Nyefee Data si iPhone ka Nexus 6 (120 mins)
2.1 Nyefee Music na Video si iPhone ka Nexus 6 (10 mins)
2.2 Nyefee kalenda na Ndi ana-akpo si iPhone ka Nexus 6 (10 mins)
ma gụọ 2.3 Nyefee SMS si iPhone ka Nexus 6 (20 mins)
2.4 Nyefee Photos si iPhone ka Nexus 6 (10 mins)
2.5 Nyefee iPhone ngwa Google Nexus (60 mins)
1 Pịa Nyefee Data si iPhone ka Nexus 6 na MobileTrans
-Esi ike gwụrụ nke sọọfụ internet anya n'ihi na free ụzọ nyefee music, video, photos, kọntaktị na ndị ọzọ si iPhone ka Nexus 6 otu mgbe ọzọ? Ebe a bụ ụzọ. Wondershare MobileTrans Ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac-enyere gị aka nyefee kalenda, video, photos, music, ozi ederede na kọntaktị site na iPhone ka MobileTrans na 1 Pịa.
1.Contacts na akaụntụ: Wondershare MobileTrans ike ịnyefe kọntaktsị na Twitter, Facebook, Google na ihe ọ bụla na akaụntụ gị na-akwado iPhone. Ya mere, biko mee ka n'aka ma ị chọrọ nyefee na kọntaktị na kalenda na akaụntụ ma ọ bụ. Ọ bụrụ na ee, biko banye na ihe ndekọ na gị iPhone. 2. Na nkwado ma weghachite: Jiri a mode mgbe ị nwere otu ekwentị na aka. Dị nnọọ ndabere data gị iPhone na kọmputa site na iTunes ma ọ bụ MoibleTrans, ma weghachi gị Google Nexus 6 mgbe ọ bụla ị chọrọ.
Nzọụkwụ 1. Run MobileTrans na gị Kọmputa
Na-amalite, download na wụnye Wondershare MobileTrans na gị Windows PC. Na-agba ọsọ ya. Ke akpan window, họrọ na ekwentị ekwentị Nyefee mode.
N ote: iTunes ga-arụnyere-ekwe nkwa na Wondershare MobileTrans na-arụ ọrụ nke ọma.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị Old iPhone na Google Nexus 6 ka Computer
Jiri USB Gịnị jikọọ ma gị ochie iPhone na Google Nexus 6 na kọmputa. Ozugbo ejikọrọ, ha ga-emere na ekwentị transfer window.
Nzọụkwụ 3. Malite nyefee iPhone ka Google Nexus 6
Dị ka ị na-ahụ, Wondershare MobileTrans ike gị nyefee kọntaktị, ozi, kalenda, video, foto na music si iPhone ka Nexus 6. Mee n'aka na ihe ị chọrọ nyefee n'etiti. Mgbe ahụ, pịa Malite Copy na-amalite nyefe.
Nyefee Music na Video si iPhone ka Nexus 6
Ịzụta tọn fairsounding songs na vidiyo si iTunes na chọrọ nyefee Nexus 6. a bụ ụzọ.
Nzọụkwụ 1. Open iTunes. Pịa Store> ikikere nke a Computer .... Wet ke gị Apple ID na paswọọdụ.
Nzọụkwụ 2. Gaa Dezie> Mmasị ...> Advanced> akọrọ Nọgidenụ iTunes Media nchekwa haziri na Copy faịlụ ka iTunes Media nchekwa mgbe na-agbakwụnye na librar y.
Nzọụkwụ 3. Bilie gị iPhone na Nexus 6 ejikọrọ na USB cables. Gaa na kọmputa na-emeghe gị Nexus 6.
Nzọụkwụ 4. Na iTunes, pịa Files> Devices> Nyefee Ịzụ s. Mgbe ahụ, gị niile zụrụ songs na vidiyo ga-na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 5. Go ka iTunes media nchekwa na kọmputa. The ịzọpụta ụzọ: C: \_ Ọrụ \_ Administrator \_ Music \_ iTunes \_ iTunes Media.
Nzọụkwụ 6. Open Music na video nchekwa na idetuo gị chọrọ music na video ma detuo ha gị Nexus 6.
Nyefee na Ndi ana-akpo na kalenda si iPhone ka Nexus 6
Ọ bụ ezigbo mfe nyefee na kọntaktị na kalenda si iPhone ka Nexus 6. iCloud eme na gị. Dị nnọọ aga Ntọala> iCloud> abanye n'ime gị iCloud akaụntụ. Mgbe ahụ, gbanye Ndi ana-akpo na kalenda ka mmekọrịta na kọntaktị na kalenda n'etiti iPhone na iCloud.
Part 1. Olee nyefee kọntaktị site na iPhone ka Nexus 6
Nzọụkwụ 1. Land iCloud website na banye na gị akaụntụ. Pịa ana-akpo. Na kọntaktị window, họrọ otu kọntaktị ìgwè na nne Mmetụta gị chọrọ kọntaktị.
Nzọụkwụ 2. Gaa na ala n'akụkụ aka ekpe na pịa gear-dị ka akara ngosi ma họrọ Export vCard ... Mgbe ahụ, kọntaktị ga-azọpụta na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3. Ugwu gị Nexus 6 dị ka ihe mpụga ike mbanye na eriri USB. Ịnyagharịa Computer na-ahụ gị na Nexus 6. Open ọ na idetuo exported vCard faịlụ ka SD kaadị gị Nexus 6.
Nzọụkwụ 4. On gị Nexus 6, na-aga Ndi ana-akpo ngwa ma họrọ ana-akpọ taabụ.
Nzọụkwụ 5. Kpatụ menu icon ekpe ka n'ụlọ bọtịnụ na ị na-ahụ menu ndepụta. Enweta Import / Export ma họrọ Import si USB nchekwa ma ọ bụ Import si SD kaadị mgbe ị na-azọpụta ndị vCard faịlụ na mpụga SD kaadị. Mgbe ahụ, iPhone kọntaktị ga-adị gị Nexus 6.
Part 2. Olee nyefee kalenda si iPhone ka Nexus 6
E wezụga kọntaktị, kalenda nwekwara ike zigara Nexus 6 site òkè. N'ihu ọha ịkọrọ gị kalenda na-kalenda faịlụ na bulite gị Google akaụntụ. N'ikpeazụ, mmekọrịta Google akaụntụ na gị Nexus 6 iji nweta iPhone Kalenda. Gụọ nzọụkwụ nyefee kalenda si iCloud ka Nexus 6.
Nyefee SMS si iPhone ka Nexus 6
Mgbe abịa SMS nyefe si iPhone ka Nexus 6, ihe na-aghọ a obere siri ike ma na mgbagwoju. Ị ga-atụgharị ụfọdụ-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ maka enyemaka. Ebe a, m na-agwa gị otú ị na-eji abụọ Android ngwa wepụ SMS si iTunes nkwado ndabere na mpaghara nyefe Google Nexus 6. Ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụ kwa mgbagwoju, ị nwekwara ike iji Wondershare MobileTrans eme na gị na otu click.
Nzọụkwụ 1. Open iTunes na jikọọ na gị iPhone na kọmputa site na iji eriri USB.
Nzọụkwụ 2. Ozugbo ahụrụ, gị iPhone ga-egosi na mmapụta sidebar nke iTunes. Pịa gị iPhone iji nweta ya akara panel ke ziri ezi.
Nzọụkwụ 3. Go aka nri panel na pịa Back Up Ugbu a. Chere ruo mgbe ndabere usoro okokụre.
Nzọụkwụ 4. Jiri eriri USB efego gị Nexus 6 dị ka ihe mpụga ike mbanye. Mgbe achọpụtara, na-aga My na kọmputa na-ahụ gị na Nexus 6. Open ọ na-egosi ya SD kaadị window.
Nzọụkwụ 4. na kọmputa gị, chọta iTunes ndabere ọnọdụ na idetuo ndabere gị kere nri ugbu a ka SD kaadị window gị Nexus 6.
Nzọụkwụ 5. On gị Nexus 6, na-aga Google Play Store, chọọ na wụnye iSMS2droid na SMS ndabere & Weghachi.
Nzọụkwụ 6. Run iSMS2droid na enweta Họrọ iPhone SMS Database. Mgbe ahụ, ịchọta na ịhọrọ iTunes ndabere faịlụ ị mepụtara n'ihu. Mgbe ahụ, enweta All ma ọ bụ họrọ mbubata SMS gị Nexus 6.
Nzọụkwụ 7. Run SMS ndabere & Weghachi. Na ya isi ihuenyo, pịa Weghachi. Mgbe ahụ, SMS faịlụ ga-egosi na ihuenyo. Lelee SMS faịlụ na enweta OK iji weghachi iPhone SMS ka Nexus 6.
Nzọụkwụ 8. Ọ na-mere. Ugbu a, gaa na ozi ngwa na-elele dị SMS.
Nyefee Photos si iPhone ka Nexus 6
Were ọtụtụ narị photos na gị iPhone? Ị ga-chọrọ nyefee gị Nexus 6, otú i nwere ekele maka ha bụla ugbu a na mgbe ahụ. Ọ bụ adịghị ike nyefee iPhone foto echekwara na Igwefoto Roll ka Nexus 6 on Windows kọmputa. Ị dị nnọọ mkpa a eriri USB mbupụ ha ka ha na kọmputa na mgbe ahụ idetuo ha gị Nexus 6. N'okpuru ebe bụ nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu. Nọgidenụ na-agụ ya.
Cheta na: N'ụzọ dị otú a, ị pụrụ nanị nyefee foto na igwefoto Roll si iPhone ka Nexus 6. Iji nyefee photos synced gị iPhone, i kwesịrị ịjụ enyemaka site na ụfọdụ-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na Nexus 6 na kọmputa na iji eriri USB.
Nzọụkwụ 2. Ozugbo ahụrụ, gị iPhone na Nexus 6 ga-ndokwasa dị ka ihe mpụga ike mbanye.
Nzọụkwụ 3. na kọmputa gị, na-aga compute r. Ị ga-ahụ gị iPhone na Nexus 6 n'okpuru Portable Devices. Gị iPhone na kpọrọ "Apple iPhone" ma ọ bụ "Nancy si iPhone" ma ọ bụ ihe dị ka, mgbe Nexus 6 na-aha dị ka Vivian si Nexus ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ.
Nzọụkwụ 4. Ugboro abụọ pịa gị iPhone. Gị iPhone window, ị ga-ahụ a DCIM nchekwa. Emeghe ya na foto niile i weere bụ nri n'ebe ahụ.
Nzọụkwụ 5. Ugboro abụọ pịa gị Nexus 6 ka ịnweta SD kaadị gị Nexus 6. Chọta Photos na nchekwa ma imeghe ya. Ma ọ bụ i nwere ike ịmepụta a ọhụrụ nchekwa ịzọpụta iPhone photos.
Nzọụkwụ 6. Ugbu a, Detuo gị chọrọ iPhone photos na mgbe ahụ mado inye ndị ọ họọrọ nchekwa gị Nexus 6.
The ndu n'elu na-agwa gị otú nyefee foto site na iPhone ka Nexus 6 on Windows kọmputa. Ọ bụrụ na ị a Mac onye ọrụ, ị pụrụ iji iPhoto ma ọ bụ Image kpọọ mbupụ iPhone foto Mac, na ojiji-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ (dị ka Android File Nyefee, MobileGo) mbubata gị Nexus 6.
Nyefee iPhone ngwa Google Nexus 6
N'ezie, ọ bụ-agaghị ekwe omume kpọmkwem nyefee ngwa site iPhone ka Google Nexus 5. Mgbe niile, ngwa ọdịnala na iPhone na .ipa, .pxl ma ọ bụ .deb formats, nke nwere ike na-arụ ọrụ na Google Nexus 6. Otú ọ dị, ọtụtụ iPhone ngwa ha Android nsụgharị. Ị nwere ike ịga na nnukwu Android ahịa - Google Play Echekwala iji chọta ha. Bụrụgodị na ọ dịghị Android na nsụgharị ndị dị, ị ka nwere ike ịhụ ọtụtụ edochi.
Ọzọ Isiokwu banyere Google Nexus Series
Mmekọrịta Outlook Ndi ana-akpo na Nexus 5
Nyefee faịlụ site PC ka Nexus 5
Olee otú Iji mgbọrọgwụ Google Nexus I9250
Nzọụkwụ na Nyefee Ndi ana-akpo ka Nexus 4
2 Easy Ụzọ ndabere Galaxy Nexus
3 Ụzọ ndabere Google Nexus 5
Otú nyefee Photos site na ekwentị gị na kọmputa gị
3 Ụzọ nyefee Data si Old iPad ka iPad ikuku 2 ma ọ bụ iPad Obere 3
Olee otú Bugharịa iPhoto Library ka a New ebe / Computer
> Resource> Nyefee> Nyefee ọdịnaya site iPhone ka Google Nexus 6 were were